Hery - Tsiky dia ampy | Septambra 2014
Atao lavanty ny satrok'i Papa Fransoà
2014-09-17 @ 19:58 in Vaovao, Finoana sy Fivavahana
Ho henonareo amin'ny vaovao malaza ato ho ato io vaovao io. Androany alina tokoa no natomboka natao lavanty ny satrok'i Papa Fransoà, tena satroka nanaovany fa tsy sandoka. Toa izao no fandehan'ny tantara izay nitranga tao amin'ny fandaharan'ny televiziona italiana Le Iene androany 17 septambra... tantara araka ny filazan'izy ireo.
I Damiano dia tafiditra niasa tao amin'io fandaharana io tamin'ny voalohandohan'ity taona ity. Tsy nahomby loatra anefa izy dia voatery nesorina. Nitady fomba maro izy hanehoana amin'ny tompon'ny fandaharana hoe mahavita zavatra ka ny tanjony dia ny haka ny satrok'i Papa Fransoà.
Ny tanjony dia ny hahazo tso-drano amin'ny zavatra manokana entiny eny amin'ny Papa Fransoà. Nividy satroka mitovy amin'ny anaovan'ny Papa ary izy ka nandritra ny fandalovan'i Papa dia niantsoantso tahaka ny olona rehetra mba horaisin'ny Papa ny satroka nentiny ka hotsofiny rano. Nijanona tokoa ny Papa ka nampanalainy ilay satroka teny aminy. Tsy nampoizina anefa fa dia noraisin'ny Papa ilay satroka ka ny azy indray no nomeny an'i Damiano.
Nentin'i Damiano tany amin'ny tompom-pandaharana ny video rehetra mikasika izany sy ilay satroka koa nanapa-kevitra izy ireo fa hatao lavanty ny satroka ka ny vola azo dia atolotra ny masera mpanao asa soa iray any Congo. Adin'ny iray aty aoriana dia efa tafakatra 80.000,00 Euro ny vidin'ilay satroka ao amin'ny Ebay (Jereo eto).
Jereo eto ny tantara rehetra amin'ny teny Italiana